larịị ígwè extruder ihuenyo na gburugburu udi
larịị waya ntupu, ejikari nwere suuare ntupu na Dutch mesh na herringbone ntupu .Otu n'ime anyị akacha mee "ahaziri nzacha" bụ ihe extruder ihuenyo. Mgbe ụfọdụ, a na-akpọkwa nzacha ndị a na ntanetị, ha abụọ pụtara otu ihe.
Ihe nchoputa nke ndi ozo bu ihe di nkpa maka onye obula nke polymer ma obu plastic. Anyị ga-enyocha ihe niile gbasara ntanetị na isiokwu a, site na nkọwa maka ịnye ọnụahịa na otu esi eme ha.
Extruder ihuenyo bụ dị iche iche nke waya ntupu bee n'ime iberibe. Akụrụngwa ndị ahụ bụ nchara nchara, igwe anaghị agba nchara na ihe ndị ọzọ. Ngwunye igwe anaghị agba nchara na-eguzogide nchara karịa ndị ọzọ. Igwe anaghị agba nchara Extruder reenskwà na-ebe etinyere na plastic mpempe akwụkwọ extruder,, granulator, na nonwoven akwa, agba masterbatch, wdg ntupu: 10 ~ 400Mesh Discs nwere dị iche iche shapes, dị ka gburugburu, square, akụrụ, oval na nwere ike dị ka ndị ahịa si requirments ....
Galvanized abụghị igwe ma ọ bụ alloy; ọ bụ usoro nke etinyere mkpuchi zinc na nchara iji gbochie nchara. Na ụlọ ọrụ waya ntupu, Otú ọ dị, a na-emeso ya dị ka otu dị iche iche n'ihi na ọ na-agbasawanye na-eji ya na ụdị ngwa ọ bụla.Galvanized Waya Mesh ka nke waya waya galvanized. Enwekwara ike iji waya waya mee ihe mkpuchi zinc. N'ikwu okwu n'ozuzu, nhọrọ a dị oke ọnụ, ọ na-enye ọkwa dị elu nke nkwụsị corrosion. Ọ bụ ...
Igwe nkịtị, nke a makwaara dị ka ígwè carbon, bụ ihe eji eme ihe nke ọma na ụlọ ọrụ waya. Ihe mejupụtara ya bu iron na obere carbon. Ewu ewu na nke ngwaahịa bụ n'ihi ya dịtụ ala costand nile iji. Plain waya ntupu, makwaara dị ka balck ígwè ákwà .black waya ntupu .ọ mere nke ala carbon ígwè waya, n'ihi na nke dị iche iche na-akpa ákwà ụzọ .nke kewara, larịị ikpa, Dutch weave, herringbone ikpa, larịị Dutch ịkpa ákwà. Plain ígwè waya ntupu na-strok ...
Commodity Name: Epoxy ntekwasa waya netting na dị iche iche waya ntupu Ihe: Mere nke ka elu nwayọọ ígwè waya, igwe anaghị agba nchara waya, aluminum alloy waya, epoxy ntekwasa mgbe larịị ịkpa ákwà. Varietydị agba dị iche iche maka nhọrọ gị. Atụmatụ: Mkpụrụ ọkụ, mgbanwe dị mma, nguzogide corrosion na ventilashion, nhicha dị mfe, ezigbo mma na gburugburu ebe obibi. Ubi nke Ngwa: Nke a nkọwapụta na-emetụta epoxy ntekwasa waya ntupu (ụdị Fabric; larịị ikpa) maka manufacturng mba esie ebietde mba e ...
Igwe anaghị agba nchara kpara waya ntupu ka si igwe anaghị ata nchara. Igwe anaghị agba nchara waya na-eyi-eguzogide, okpomọkụ-eguzogide, acid-eguzogide na corrosion eguzogide. dị iche iche akara ule nke igwe anaghị agba nchara na-eji waya ntupu. a na-eji ihe dị iche iche eme ihe na ngwa a kapịrị ọnụ iji jiri ihe onwunwe pụrụ iche. Anyị na-emepụta ntupu waya n'ụdị dị iche iche. The ịkpa ákwà kpebisiri ike dị ka ndị ahịa chọrọ, dị ka ihe onwunwe, waya n'obosara, size nke ntupu, obosara na lengt ...
Welded waya ntupu ka nke elu-edu ala-carbon ígwè waya, esichara site akpaka nkenke na ezi n'ibu akụrụngwa ịgbado ọkụ, na mgbe ahụ electro kpaliri ọkụ-tinye galvanized, ịkwanyere na ndị ọzọ na elu ọgwụgwọ maka passivation na plasticization. Ihe: Low carbon steel waya, igwe anaghị agba nchara waya, wdg Types: galvanized welded waya ntupu, ịkwanyere welded waya ntupu, welded ntupu panel, igwe anaghị agba nchara welded waya ntupu, wdg Wekpa ákwà na e ji mara: kpaliri tupu ịkpa ákwà, ...
Ngwunye ígwè gbasaa bụ ihe mpempe akwụkwọ nke e guzobere site na ntanye igwe gbasaa na igwe na-akpacha ajị iji mepụta ntupu. Ihe: Aluminom efere, obere carbon nchara efere, igwe anaghị agba nchara efere, nickel efere, ọla kọpa efere, aluminum magnesium alloy efere, wdg akpa ákwà na e ji mara: Ọ na-mere site zọ na ịgbatị nke ígwè efere. Igwe ntupu nwere njirimara nke sturdiness, nchara nchara, nnukwu okpomọkụ na-eguzogide, na ezigbo mmetụta ventilashion. Dị: Kwekọ ...
Anyị na-emepụta Nickel Mesh, Nickel Wire Mesh, Nickel gbasaawanye ọnụ na Nickel Mesh Electrode maka Batrị. A na-eji ngwaahịa nickel mee ihe dị elu, ihe dị ọcha dị elu. Anyị na-emepụta ngwaahịa ndị a na-agbaso ụkpụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Nickel Mesh nwere ike ịkewa n'ụdị abụọ: ntaneti Nickel (akwa nickel waya) na nickel gbasaa. Nickel waya meshes na-akasị ji dị ka iyo media na mmanụ ụgbọala cell electrode. A kpara ha na waya nickel dị elu (ịdị ọcha> 99.5 ma ọ bụ pu ...